Samy vehivavy sy mandeha ny sivana | Hevitra MPANOHARIANA
Tsy nisy niresaka ny teny Ambatomanga ny ankamaroan'izy ireo fa ny teny Ivandry ihany no nolazainy. Misy ve ny fifanandrifian-javatra?
Nampidirin'i jentilisa @ 09:28, 2010-03-09 [Valio]
Radio tapahan-dry lerony
Marina ny anao amin'itony: "misy hatrany ny olona no miandry toe-javatra fotsiny dia tsy ampoizina ny ho fihetsehan'ny olona."
Ny radio Fahazavana efa ela dia mandalo brouillage. Henoko teny antsefatsafany fony i Lolo mbola tsy niditra am-ponja fa tera-tany vahiny efa statut d'expulsé dia mandray anjara @ izany jeu izany.
Tamin'iry herinandro lasa iny no efa tsapako indraindray fa toa ireny tsy mahazo tonalité ireny rehefa hihaino ny radio Fahazavana.
Ny alin'ny Alatsinainy teo andro voalazanao dia tsy nandeha tokoa. Ho solony dia azonay soa aman-tsara ilay RADIO GASY, ao tsara ny fandaharana tamin'io!
Marina tokoa io ambaranao @ fehezan-teny farany ao anaty lahatsoratra io.
Nampidirin'i HoAiza @ 03:21, 2010-03-10 [Valio]
Rahefa miresaka MaTv, dia misy zavatra tsikaritro ihany koa: tamin'ilay bemidina nataon'ny zandary teny Bel Air, hoe hisambotra an'i Rakotovaza sy Teza, NIANDRY izay mba hivoahany tao @ matv ny tena, fa tsy nisy ê!
Alao hande amin'izao, matoky io chaîne iray io aho, ary misy antony ao, paik'ady tsy maintsy atao.
Nampidirin'i HoAiza @ 03:30, 2010-03-10 [Valio]